Israel Oo Xarunta Nukliyeerka U Isticmaalaysa Dagaalka ay kula Jirto COVID-19. -
Dowladda Israel ayaa furatay xero dagaal oo Nukliyeerka lagu kaydiyo oo ku taal buuraha Qudus si ay gacan uga geysato isku dubaridka ololaheeda ka dhanka ah faafitaanka coronavirus.
Xeradan oo loo yaqaan “Xarunta Maamulka Qaranka”, ayaa la dhisay toban sano ka hor kabib markii ay Israel walaac ka muujisay barnaamijka nukliyeerka Iran iyo gantaalaha ay soo ridaan Hezbollah ama kooxda reer Falastiin ee Xamaas.
Sida ay sheegeen saraakiisha Israa’iil, waxaa xeradan dhismayaasha ay ka kooban tahay ka mid goobo la dego, iyo xafiisyo wax laga maamulo oo tas-hiilaadku u dhan yihiin, waxaana sidoo kale laga heli karaa hilino xeradn ku xidhaya dhismaha dowladda ee magaalada Qudus iyo jidad kale ku gaynaya magaalada Tel Aviv.
“Xaruntan ayaa waxa loo isticmaalayaa maareynta, xakameynta, kormeerka iyo daba-galka” coronavirus, ayuu yiri sarkaal Israa’iili ah oo codsaday inaan la magacaabin.
“Xeradan waxa ay xudun u noqontaa dadaalada lagu xakamaynayo Corona, waxa laga agaasimi doonaa hawlaha lagaga hortago cududka, waxa lagu ururin doonaa xogta xanuunka, waxana aan nahay dal fahamsan in mushkiladan Corona ay tahay mid soo afjarkeedu uu daba-dheeraan karo”
Maraykanka Oo Qaybiyay 2 Tirilliyan Oo Loogu Talo-galay Gurmadka Deg-dega ah.
Masuuliyiinta Turkiga ayaa shaacisay inay la socon doona mobilada kuwa laga helay kiisaska cusub ee cudurka Coronavirus si loo hubiyo inaysan jebin xayiraada dhinaca karantiil ee lagu soo rogay, iyagoo…
Xiisad Colaadeed Oo ka Taagan Deegaanka Xudun Ee Gobolka Sool.